Hungwaru hwekugadzira huri kuchinja sei mutambo mubhizinesi nhasi? - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
chakagadzirwa Intelligence, Bhizinesi Njere
izwi chakagadzirwa njere yakagadzirwa muma1950, asi mamwe epfungwa dzayo dzave dziripo kwemakumi emakore. Artificial Intelligence imunda unoshandisa makomputa kupedzisa mabasa anowanzo hukama nehunyanzvi hwekuziva kwevanhu sekuona uye. kuziva mutauro -Inoshandiswa mukugadzira otomatiki, injiniya yemuchadenga, indasitiri yezvekufambisa, nezvimwewo. Kusimukira kuchangoburwa paGoogle Deep Mind paAlphaGo kwaita shanduko huru pakutsvaga nezve AI pamwe nekugadzira nhoroondo pachayo nekukunda mumwe wevatambi veGood vepamusoro pasi rose Lee Sedol 4- 1.
Zvinogona kunzwika sezvakanyanya kunaka kuti zvive zvechokwadi asi kana zvasvika pamabhizinesi sarudzo iyi tekinoroji inopa mibairo inoshamisa. Mabhizinesi ikozvino anokwanisa kuongorora huwandu hwakawanda hwe data ingadai yakavatorera makore kuti vazvigadzire kare uye voita sarudzo dzakanangana nekutarisa kwekufungidzira kwakagadzirwa neAI algorithms. Ichi chinyorwa chichaita kuti AI inobata sei chikamu chemabhizinesi
Sekureva kwaGartner, 68% yevatongi vezvemabhizimusi vanoti vachange vaine imwechete AI-based CXO chirongwa mu2018 uye 75% vanoti kuitwa kweAI matekinoroji kwakakanganisa sangano ravo. Mabhizinesi ave kutoshandisa machine learning sechikamu chemabasa avo ezuva nezuva uye vari kutsvaga kushandisa tekinoroji iyi zvakanyanya mukati memakore mashoma anotevera. Iyo New York Times nguva pfupi yadarika yakamhanya nenyaya yekuti Unilever akashandisa sei algorithm yakagadzirwa neAccenture kuitira kuti awedzere mitengo yekutendeuka pawebhusaiti yayo ne20%.
Mukuru wehunyanzvi weNuance, Kevin O 'Brien anotenda kuti "hapana mubvunzo" kuti AI iri kuzoshandura kushambadzira: "Haisisiri rudzi urwu rwechinhu chisinganzwisisike apo iri komputa iri kutaura newe kana kuyedza kutengesa chimwe chinhu," anodaro. "Izvozvi ndezve matangiro atinoita kukwidziridza ruzivo rwevatengi uye nekupa kusangana kwakasarudzika."
Unilever inoshandisa algorithm yakagadzirwa neAccenture kuitira kuti iwedzere mitengo yekutendeuka pawebhusaiti yayo ne20%.
AI iri kushandiswa zvakanyanya mukati memakore mashoma anotevera, sezvo mabhizinesi anotarisa kushandisa tekinoroji zvakanyanya zvakanyanya. Unilever, semuenzaniso, anga achishandisa AI kwemakore akati wandei uye ndokuti bhizinesi ravo rinoita kuti Njiva zvigadzirwa zvekuchengetedza zvemunhu zvifambire mberi zvakanaka neakajeka otomatiki kubva ku data hombe gore rapfuura vachicheka mari.
Nhasi, Artificial Intelligence (AI) inoshandiswa kakawanda mubhizimusi rekutora sarudzo kupfuura zvingafungidzirwe. Mabhizinesi ikozvino anokwanisa kuongorora huwandu hwakawanda hwe data ingadai yakavatorera makore kuti vazvigadzire kare uye voita sarudzo dzakanangana nekutarisa kwekufungidzira kwakagadzirwa neAI algorithms. Izvi, pakati pezvimwe zvinhu, zvakabvumidza mabhizinesi kutora mukana weBig Data
Artificial Intelligence iri kuita sei sarudzo dzebhizinesi mubhizinesi nhasi?
Iyo AI algorithm inosimbisa kugona kwebhizinesi rekushandisa dhata hombe uye kubvisa kukosha kwariri. Pakave nekufambira mberi kwakawanda mumunda weAI munguva pfupi yapfuura, nehunyanzvi hwekufunda nzira dzakakwanisa kuburitsa mamiriro-e-iyo-ekupedzisira mhedzisiro pane akawanda maficha anosanganisira mufananidzo uye kutaura kwekutaura, kugadzirisa mutauro mutauro, yekusimbisa kudzidza, nevamwe.
Sezvo mabhizinesi achienda akananga shanduko yedhijitari uye tora tekinoroji yakadai gore kadambari nehungwaru hwekunyepedzera, ivo vanozoita shanduko dzakakomba dzinozovapa mabhenefiti akanaka emari nekuwana kugona mukuita kwavo. Kuti varambe vachikwikwidza mabhizinesi vanofanirwa kuzvigadzirira mikana mitsva; izvi zvinogona kuwanikwa kuburikidza nedata-rinotungamirwa kuita sarudzo. Tarisa RemoteDBA.com.
Ichi chinyorwa chinoratidza kukosha kweArtificial kwakakosha kune bhizinesi nhasi. Kune akawanda akavhurika-sosi maturusi uye programming mitauro iyo inogona kushandiswa kuitira kuti ishandise AI algorithms mune yako wega bhizinesi modhi.
Maitiro ekushandisa AI muBhizinesi? Kubatsira kwekuisa muchina kudzidza uye AI muchikamu chezvemari ndechekuti ivo vanobatsira kugadzirisa, kuronga, kururamisa, uye kuongorora akakosha maseti e data. Izvi zvinobvumidza mabhizinesi kuti ashandise zvirinani nguva yavo nekunzwisisa maitiro evatengi zvirinani uye nekuwedzera kukosha.
Iko kukanganisa kweAI pamabhizinesi uye mashandiro ayo nhasi
Hunyanzvi hwekugadzira hwave chinhu chikuru chebhizinesi zano pasirese. Makambani akabudirira anogara achitsvaga nzira dzekuwedzera kugona kwavo, kugadzirisa ruzivo rwevatengi, uye kudzikisa mutengo wekuita bhizinesi. Maviri ematambudziko makuru avanotarisana nawo pavanenge vachikura bhizinesi ravo uye nekuvandudza mashandiro aya anotenderedza data uye kutsvaga nzira dzekuwedzera dhata hombe.
Ramangwana kunyorera kwehungwaru hwekunyepedzera inotariswa mukati, nedzimwe nyanzvi dzichitenda kuti yaizoshandiswa kwese kwese mukati memakore mashoma anotevera vamwe vachifunga kuti ichaganhurirwa nekuda kwezvimwe zvinhu zvakaita sekuchengetedzeka uye mibvunzo yetsika yakakomberedza michina yakazvimirira inoita sarudzo dzakakura nezve hupenyu hwevanhu pasina kupindira kwevanhu. .
Iyo Ramangwana reArtificial Intelligence munzvimbo yebasa
Artificial intelligence (AI) iri kushandura mabhizinesi kubva kunenge ese maindasitiri. AI ine basa riri kukura munzvimbo yebasa:
Iyo indasitiri yemotokari inoshandisa AI kufanofungidzira kana chinhu chinoda kuchengetedzwa chisati chakundikana uye kudzora dzinozvityaira mota;
Makambani ezvehutano anoshandisa AI kutsvaga mapatani mune data revarwere iro rinogona kuratidza zviratidzo zvechirwere sekurwadziwa kwemoyo uye sitiroko; uye
Vatengesi vanoshandisa AI kugadzirisa mashandiro ebhizinesi, kuwedzera mari nekunanga kushambadzira, kufungidzira kudiwa kunoenderana nemaitiro ekutengesa apfuura, uye kuona kubiridzira / kusatendeseka.
Nei mabhizinesi achifanira kufunga kushandisa Artificial Intelligence mukuita sarudzo?
Nepo mabhizimusi mahombe ari iwo anotarisisa AI, kune zvakare mabhenefiti mazhinji ekuishandisa mumabhizinesi madiki nepakati nepakati zvakare. Izvi zvinosanganisira:
Yakagadziridzwa ruzivo rwevatengi;
Bhizinesi maitiro otomatiki; uye
Kuderedza mashandiro emitengo, zvese izvi zvinoita kuti bhizinesi riwane mukana wemakwikwi pamusoro pevezera raro.
Ndeapi mabhizinesi anodikanwa kuziva nezvekushandisa huchenjeri hwekunyepedzera - Zvinokosha zvekutora kune vanoita sarudzo
AI inogona kushandiswa mubhizinesi kuita sarudzo uye kutora matanho ayo vanhu vaisazofunga kufunga kuzviita, asi haigone kufunga yega. Inofanira kugara ichishandiswa sechishandiso kana mushandi kune anoita sarudzo, kwete sekutsiva ivo. Nepo mamwe mabasa mukati meimwe maindasitiri ari kutoitwa neAI, pane zvimwewo zvakawanda zvinoshandiswa zveiyi tekinoroji. Munyori anoti kushandiswa kwemuchina kudzidza kunofanira kutariswa zvakanyanya nevatungamiriri vanoda kuti kambani yavo iwane mabhenefiti kubva kuAI. Kudzidza kwemuchina kwave kwakabudirira zvakanyanya mukubatsira makambani kudhitaina data revatengi kuti vanzwisise zvigadzirwa zvavanogadzira kana kuti vangavandudza sei bhizinesi ravo. Microsoft, semuenzaniso, inoshandisa huchenjeri hwekugadzira kubatsira kudzivirira kuzviuraya pakati pevashandisi vayo. Ivo vanokwanisa kuenda kuburikidza nenzira dzakasiyana dzakasiyana dzekutaurirana uye kutora pane inonyevera zviratidzo zvekuzvikuvadza kana kuzviuraya.
Mabhizinesi ari kutoshandisa AI mukufungidzira kuongorora uye kuburitswa kwezvigadzirwa, zvakare kutsvakurudza misika. Zvinogoneka kuti panosvika 2020 pave nekombuta ine huchenjeri hwepfungwa; imwe inogona kuona manzwiro mukati mezvinyorwa, mifananidzo, vhidhiyo, uye odhiyo zvemukati. Izvi zvinogona kuita kuti email yako iverengwe sebhuku uye kuti kuverenga kunopesvedzera toni yemhinduro yaunogamuchira kubva kukambani yawakanyorera.